PST ဖိုင်အဂတိလိုက်စားမှုကိုကာကွယ်ရန်နည်းလမ်း (၉) ခု - DataNumen
ပင်မစာမျက်နှာ ထုတ်ကုန်များ DataNumen Outlook Repair PST ဖိုင်အဂတိလိုက်စားမှုကိုကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများ
Outlook PST ဖိုင်များသည်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများဖြစ်သည်။ ဒါကိုကာကွယ်ဖို့နည်းလမ်းတွေရှိပါသလား။ အဖြေမှာ ဟုတ်သည်! ငါစာရင်း 8 မီတာost သင်၏ PST ဖိုင်ကိုအကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့်ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်အရေးကြီးသောနည်းလမ်းများ -
သင်၏ PST ဖိုင်ကိုဖောင်းမထိုးပါနှင့်။ Outlook 2003/2007 သည် 20GB လောက်ကြီးမားသော PST ဖိုင်များကိုထောက်ပံ့သည်။ Outlook 2010 သည် 50GB ကိုထောက်ပံ့သည်။ သင့် PST ဖိုင်သည်ထိုထက်မကြီးစေသင့်ပါ 10GB, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့:
Most ကြီးမားသော PST ဖိုင်နှင့်အတူစစ်ဆင်ရေးအလွန်နှေးကွေးဖြစ်ကြသည်
အချို့သောအသေးစားအဂတိလိုက်စားမှုများကို Outlook (သို့) scanpst မှဖြေရှင်းနိုင်သော်လည်း PST ဖိုင်ကြီးသည်ဆိုလျှင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အချိန်ကုန်မည်။
ဘယ်ဘက် panel တွင်အတူတကွ PST ဖိုင်များကိုအတူတကွဖွင့်ရန် Outlook 2003-2010 သည်ယခုအခါအထောက်အပံ့ပေးသည် ထို့ကြောင့် PST ဖိုင်တစ်ခုစီ၏အရွယ်အစားကိုလျှော့ချရန် Outlook rules နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသော PST ဖိုင်များသို့သင်၏အီးမေးလ်များကိုပြောင်းရွှေ့ရန်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
သင်၏ယခင် format PST ဖိုင်ကို 2GB မချဉ်းကပ်ပါနှင့်။ Microsoft Outlook 2002 နှင့်အစောပိုင်းဗားရှင်းများတွင် Personal Folders (PST) ဖိုင်အရွယ်အစားကို 2GB အထိကန့်သတ်ထားသည်။ PST ဖိုင်အရွယ်အစားသည် 2GB နီးပါကပြောင်းလဲနိုင်သောပြproblemsနာများနှင့် PST ဖိုင်သည်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အဟောင်းပုံစံ PST ဖိုင်သည်ထက်နည်းသည်ကိုအမြဲတမ်းသေချာပါစေ 1.5GB အလေ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခု
အီးမေးလ်အမြောက်အမြားပေါ်တွင်အသုံးမပြုပါနှင့်။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်ချိန်တည်း၌အီးမေးလ်အမြောက်အများကိုလည်ပတ်နေပါက Microsoft Outlook သည်ပိတ်ဆို့ခံရလိမ့်မည်။ အသေပိတ်ထားပြီးနောက် Outlook ကိုပုံမှန်မဟုတ်ပိတ်ထားရလိမ့်မည်၊ ၎င်းမှာ PST ဖိုင်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဖြစ်နိုင်သည်။ တစ် ဦး ကအတွေ့အကြုံကန့်သတ်သည် 10,000 အီးမေးလ်များ ထို့ကြောင့်၊ ၁၀၀၀၀ ကျော်သောအီးမေးလ်များကိုရွေးချယ်ရန်၊ ရွှေ့ရန်၊ ကူးရန်သို့မဟုတ်ဖျက်ရန်ကြိုးစားသောအခါအသုံပြုခြင်းတစ်ခုမပြုလုပ်ရပါ။ အဲဒီအစား, m မှာလည်ပတ်ost တစ်ချိန်တည်းတွင်အီးမေးလ် ၁,၀၀၀၊ အီးမေးလ်အားလုံးကိုမပြီးမချင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုပြန်လုပ်ပါ။
သင်၏ PST ဖိုင်ကိုကွန်ယက် drive တစ်ခုသို့မဟုတ်ဆာဗာတွင်မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။ PST ဖိုင်ကိုကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းကိုဝေးလံခေါင်ဖျားသော drive (သို့) ဆာဗာတွင်သိုလှောင်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။ network environment သည် PST ဖိုင်၏သိပ်သည်းစွာဝင်ရောက်ခြင်းကိုမပံ့ပိုးနိုင်သဖြင့် PST ဖိုင်ကိုမကြာခဏပျက်စီးစေသည်။ ထို့အပြင်ကွန်ယက်ပေါ်ရှိ PST ဖိုင်ကိုမျှဝေခြင်းမပြုပါနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုဖြစ်ပွားလေ့ရှိသောကွန်ယက်မှတဆင့်အသုံးပြုသူများစွာ PST ဖိုင်၏တူညီသောကော်ပီကိုတပြိုင်နက်တည်းဝင်ရောက်ခွင့်မပြုပါနှင့်။
Outlook ကိုဖွင့်နေတုန်းမပိတ်ပါနဲ့။ အကယ်၍ သင်က Outlook ကိုပုံမှန်လည်ပတ်နေတုန်းပုံမှန်မဟုတ်သောပိတ်ထားလျှင်၎င်းအချိန်တွင် Outlook မှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေသော PST ဖိုင်သည်အလွယ်တကူပျက်စီးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်လုပ်သင့်သည် ဘယ်တော့မှ Outlook task manager ကိုပုံမှန်လည်ပတ်နေတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံသင် Outlook ကိုပိတ်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်အီးမေးလ်များပို့ခြင်း / လက်ခံခြင်းကဲ့သို့သောအချို့သောအလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်၎င်းသည်နောက်ခံတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်ရံဖန်ရံခါ system tray တွင် Outlook icon လေးကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သို့သော် Outlook သည်ဆက်လက်လည်ပတ်နေမနေကိုဆုံးဖြတ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ s ဖြစ်သည်tart “ Task Manager” နှင့်လျှင်စစ်ဆေးပါ “ OUTLOOK.EXE” ယင်း၌တည်ရှိ၏ “ ဖြစ်စဉ်များ” စာရင်း (သင်ပိုမိုလွယ်ကူစွာနေရာချထားရန်ကူညီရန်စာရင်းကိုစီပါ။ ) တစ်ခါတစ်ရံတွင် Outlook သည်အမြဲတမ်းမှတ်ဉာဏ်တွင်အမြဲရှိနေသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Outlook သည် network မှအီးမေးလ်များကိုပို့ရန်နှင့်လက်ခံရန်ကြိုးစားခြင်းနှင့်သင်၏ကွန်ယက်စနစ်သည်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့် Outlook သည်အဆုံးမဲ့သို့မဟုတ်အချိန်ကုန်လွန်ပြီးနောက်စောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် Outlook ပိတ်ခြင်းကိုအရှိန်မြှင့်လိုပါက Outlook အသုံးပြုသော network connection ကိုသင် disable လုပ်နိုင်သည်။ ထို့နောက် Outlook connection သည်မကြာမီအချိန်ကုန်မည်ဖြစ်ပြီးနောက်ခံလုပ်ငန်းများကိုဖျက်သိမ်းပြီးမကြာမီထွက်သွားလိမ့်မည်။ အချို့သောကိစ္စရပ်များအတွက်၊ Outlook သို့မဟုတ် Outlook ဗန်းသည်အစဉ်အမြဲတည်နေလျှင်သင်ကြိုးစားနိုင်သည် restart Outlook, မိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းပြီးတော့ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်း Outlook က system ကိုလုံးဝထွက်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သင်၏ကွန်ပျူတာကိုပိတ်ခြင်း / ပိတ်ခြင်းမပြုမီ Outlook မှထွက်ခွာသွားကြောင်းသေချာပါစေ။ Outlook ကိုမထွက်ပဲကွန်ပျူတာကိုပိတ်လိုက်ပါက (၅) လိုပဲ PST ဖိုင်ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်နည်းနည်းအဆင်မပြေသော်လည်းကွန်ပျူတာ system ကိုမပိတ်ခင် Outlook ထွက်သွားတာသေချာအောင်လုပ်ပါ။ သို့မဟုတ်သင်ဤအရာကိုသင့်အတွက်အလိုအလျောက်စစ်ဆေးရန်အက်ပလီကေးရှင်းငယ်တစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်၏ AntiVirus program နှင့်သတိထားပါ။ သင်၏ PST ဖိုင်သည်အီးမေးလ်အမြောက်အများပါဝင်ပြီးသင်၏ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးပရိုဂရမ်က၎င်းကိုကာကွယ်လိမ့်မည်။ ထိုအခါ most သင်၏ PST ဖိုင်ရှိအီးမေးလ်များနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ဆောင်မှုများသည်သင်၏ AntiVirus ပရိုဂရမ်အပေါ်တွင်လည်းသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အကယ်၍ ပရိုဂရမ်သည်နှေးကွေးလျှင်၊ လုပ်ငန်းများကိုလည်းနှေးကွေးလိမ့်မည်။ အချို့သော AntiVirus ပရိုဂရမ်များသည် PST ဖိုင်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ Microsoft OneCare သည် PST ဖိုင်များကိုပင်ဖျက်နိုင်သည်။
Outlook Add-Ins တွေကိုသတိထားပါ။ အချို့သောမှားယွင်းသော Outlook Add-Ins များသည် အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်မှန်ကန်စွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားခြင်းသို့မဟုတ်စနစ်တကျလည်ပတ်ခြင်းမရှိပါကသင်၏ PST ဖိုင်ပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ တစ်ခါတစ်ရံသင့် PST ဖိုင်မကြာခဏပျက်စီးခြင်းဖြစ်လျှင်သင်သည် Add-Ins ကိုပိတ်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏ PST ဖိုင်များကိုအပတ်စဉ်အရန်ကူးပါ။ Backup သည်ဒေတာဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်းသင်၏ PST ဖိုင်များကိုအမြဲတမ်း backup လုပ်ပါ၊ သို့မှသာသင်၏ PST ဖိုင်သည်ပျက်စီးယိုယွင်းပြီးပြန်လည်မရရှိနိုင်ပါကနောက်ဆုံးပေါ်အရန်ကူးခြင်းကိုပြန်ယူနိုင်သည်။
သင်၏ PST ဖိုင်များပျက်စီးသွားလျှင်၎င်းကိုအောက်ပါကိရိယာများဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်။ ပြုပြင်နိုင်သည်။
scanpst.exe။ ဒါ့အပြင်ကိုခေါ် Inbox ပြုပြင်ရေးကိရိယာ။ ၎င်းသည်သင်၏ Outlook တွင်ထည့်သွင်းထားသောအခမဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကမီတာကိုပြုပြင်နိုင်ပါတယ်ost သင့်ရဲ့ PST ဖိုင်များအတွက်အသေးစားအမှားအယွင်းများနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၏။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် ဒီမှာ.
DataNumen Outlook Repair။ scanpst သည်သင်၏ PST ဖိုင်ကိုမပြင်နိုင်ပါကသို့မဟုတ်သင်လိုချင်သောအီးမေးလ်များကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ခြင်းမရှိပါကသင်အသုံးပြုနိုင်သည် DataNumen Outlook Repair။ ၎င်းသည်အလွန်ဆိုးသောပျက်စီးနေသော PST ဖိုင်ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်၏အကျင့်ပျက် PST ဖိုင်ထဲမှာမဆို Outlook ကဒေတာရှိပါတယ်အဖြစ်, DataNumen Outlook Repair ၎င်းတို့ကိုပြန်လည်ဆယ် တင်၍ ပုံသေ PST ဖိုင်အသစ်တစ်ခုထဲသို့သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။